स्तन क्यान्सर : कारण र रोकथामका उपाय |
स्तन क्यान्सर : कारण र रोकथामका उपाय
प्रकाशित मिति :2018-01-19 15:27:39
स्तन क्यान्सरबाट नेपालमा कति महिला प्रभावित छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभएपनि करिब ५० हजार महिला स्तन क्यान्सरबाट पीडित भएको अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय स्तन क्यान्सरबाट धेरै महिलाले ज्यान समेत गुमाएका छन् । नेपालमा ३० देखि ५० वर्षका महिला बढी स्तन क्यान्सरबाट प्रभावित भएको पाइएको छ । विकसित देशका अधिकांश महिलाहरू ४० वर्ष पुगेपछि प्रत्येक वर्ष म्यामोग्राफी(स्तन क्यान्सर जाँने प्रविधि) गर्छन् । नेपालमा म्यामोग्राफी गराएका महिला १ प्रतिशत भन्दा कम छ । जसले गर्दा समयमै रोग पहिचान हुन नसकी धेरै महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डा. ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठसँग स्तन क्यान्सरको रोकथाम र उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा महिला खबरका लागि खेमा बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानी :
स्तन क्यान्सर भनेको के हो ?
स्तनमा भएका कोष–कोषिकामा असामान्य परिवर्तन आई तिनीहरूको अनियन्त्रित तथा अनावश्यक वृद्धिबाट बन्ने गिर्खा, गाँठागुँठी र निको नहुने घाउलाई स्तन क्यान्सर भनिन्छ । स्तन क्यान्सर महिला र पुरुष दुवैमा लाग्न सक्छ ।
पुरुषमा पनि स्तन क्यान्सर हुन्छ ?
स्तन क्यान्सर महिलाको मात्र रोग हो भन्ने भ्रम छ । तर त्यस्तो होइन । ९९ प्रतिशत महिलामा स्तन क्यान्सर हुन्छ भने १ प्रतिशत पुरुषमा स्तन क्यान्सर हुन्छ । पुरुषमा लाग्ने स्तन क्यान्सर महिलाको भन्दा बढी खतरनाक हुन्छ । पुरुषले स्तन परीक्षण गर्न आवश्यक नठान्ने, लाज मान्ने वा पुरुषमा पनि स्तन क्यान्सर हुनसक्छ भन्ने जानकारी नहुनाले अन्तिम अवस्थामा यस रोगको परीक्षण गर्छन् ।
के–के कारणबाट स्तन क्यान्सर हुन्छ ?
विज्ञानले स्तन क्यान्सर यही कारणले हुन्छ भनेको छैन । तर यो रोग लाग्नुका केही कारणहरू छन् । १५ देखि ३० प्रतिशत स्तन क्यान्सर वंशाणुगत कारणबाट सर्छ भन्ने छ । स्तन क्यान्सर भयो भन्दैमा आतिनु हुँदैन । सुरुमा नै उपचार गराउन सके राम्रो परिणाम दिन्छ ।
१) वंशाणुगत–आमा, दिदी, बहिनी, छोरी मध्ये कुनै एकमा भएमा ।
२) १२ वर्षभन्दा पहिले महिनावारी भएका र ४५ वर्षपछि पनि महिनावारी ।
३) मदिरा सेवन तथा धुम्रपान गर्ने महिला ।
४) पाँच वर्ष भन्दा बढी परविार नियोजनका साधन पिल्स वा सुई प्रयोग गरेका महिला ।
५)अखाद्यय खानेकुरा खाएमा,मोटो महिलामा, डिला विवाह गर्न,ढिला बच्चा जन्माउने महिलामा स्तन क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावान छ भन्छ विज्ञानले ।
स्तन क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने ? कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् ?
स्तन क्यान्सरको सुरुको अवस्थामा यस्ता लक्षणहरू हुन्छन् भन्ने नै हुदैन । यसका सामान्यतया यस्ता लक्षणहरू देखा पर्छ । यस्ता लक्षण देखिना साथ अस्पताल वा डाक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्छ । जस्तै,
१) स्तनमा गिर्खा हुनु र गिर्खा कडा हुनु ।
२) स्तन वा स्तनको मुन्टोको आकार–प्रकार परविर्तन हुनु ।
३)स्तनको मुन्टोबाट रगत आउनु ।
४)स्तनको छालाको रगं परिवर्तन हुनु ।
स्तन क्यान्सरबाट कसरी बच्ने त ?
स्तन क्यान्सरका चार चरणहरू छन् । स्तन क्यान्सर लागेको खण्डमा कति वर्षसम्म बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुरा क्यान्सर कुन चरणमा छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । पहिलो चरणमा स्तन क्यान्सर छ भन्ने थाहा भयो भने पाँच वर्षपछि क्यान्सरहित हुनसकिन्छ वा लामो आयु बाच्न सकिन्छ । त्यसपछि चरणका हिसाबले जती ढिला भयो उती बाच्ने कम आधारहरू हुन्छन् । यो रोगबाट बच्न हामीले नियमित स्तनको चेकजाच, स्तनको स्वयं परीक्षण गर्ने, अखाद्य खानेकुरा नखाने, धुम्रपान, मध्यपान नगर्ने र स्तनमा केही समस्या देखिना साथ तुरुन्त अस्पताल वा चिकित्सकोमा जानुपर्छ । स्तन क्यान्सरका बारेमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नु अति आवश्यक छ ।
स्तन क्यान्सरको उपचार कति महंगो छ ?
हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ आर्थिक सक्षमता छैन, इन्स्युरेन्स छैन, अशिक्षा छ, त्यहाँ क्यान्सरको उपचार एकदमै महंगो छ । सरकारले यसका लागि एक लाख अनुदान रकम त दिएको छ तर त्यो निकै अपुग छ । त्यसैले हामीले सरकारसँग पाँच लाख दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छौं । जापान र चाइना जस्ता देशहरूमा ४० वर्ष नाघेका महिलाहरूमा नियमित इन्डोस्कोपी, ३५ वर्ष नाघेका महिलाहरूमा म्यामोग्राफी गरिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा अस्पताल र पैसाको पहुँचमा भएका महिलाहरू त नियमित चेकजाँच गर्छन् । तर हुम्ला जुम्ला जस्ता विकट जिल्लाहरूमा महिलाहरूलाई आफ्नो स्तन आफैले जाँच गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउछौं । उपचार सेवा महंगो छ ।
कुन उमेर समूहका महिलाहरूमा बढी देखिन्छ स्तन क्यान्सर ?
३० देखि ४० वर्षका महिलाहरूमा स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना बढी छ । महिलाहरू स्वयम् सचेत हुन सकेमा यो रोगसँग लड्न सकिन्छ ।
कुन अवस्थामा महिलाहरू अस्पतालसम्म आईपुग्छन् ?
धेरै जसो महिलाहरू स्तनबाट रगत बग्न थालेपछि, गाँठागुँठी हुन थालेपछि र स्तन क्यान्सरको लास्ट स्टेजमा मात्र अस्पताल आउने गरेका छन् । नेपालका दुर्गम जिल्लाहरूमा महिलाहरूलाई स्तन क्यान्सरबारे जानकारी नै छैन । स्तनमा गिर्खाहरू आए पनि रोग लुकाउने प्रवृत्ति, लाज तथा संकोचका कारण अधिकांश नेपाली महिलाहरू स्तन परीक्षण गराउन अस्पताल जाँदैनन् र अन्तिम अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा खोज्छन् । त्यतिबेलासम्म उपचारको विकल्प प्रायःसमाप्त भइसकेको हुन्छ । जसले गर्दा ज्यान पनि जान्छ, पैसा पनि जान्छ । यसका लागि स्तन तथा क्यान्सर रोगका बारेमा चेतना फैलनु अति आवश्यक छ । क्यान्सर रोग उपचार मात्र गराएर निको हुन्छ भन्ने भ्रण पाल्नु हुँदैन । स्तन क्यान्सरको पहिलो स्टेजमै नियमित चेकअपका लागि आउनेमा सहरका महिलाहरू बढी छन् । तर ग्रामिण भेगका महिलाहरू तेस्रो र चौथो चरणमा मात्र आउने गरेका छन् ।
ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू केके हुन् ?
स्वयम् आफै यो रोगको औषधी हो । किन भने आफू सचेत भएमा यसबाट बच्न सकिन्छ । आफूले खाइरहेको खाना कस्तो छ, त्यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । मादक पदार्थ, सुर्तीजन्य पदार्थ, चिल्लो तथा बोसोयुक्त खानेकुराहरू नखाने, सुत्केरी महिलाले स्तनपान गराउने, परिवार नियोजनको साधनको रुपमा पिल्स सधैँ नखाने र समयमै विवाह गर्ने ।
महिनावारी भएको एक सातापछि जुन समयमा स्तनहरू दुख्ने तथा ठूला हुने हुन्छन् । नुहाउने समयमा वा नुहाएर ठूलो ऐना अगाडि उभिएर हातका चार औला परीक्षण गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । यदि आफुलाई संका लागेमा स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकबाट परीक्षण गराउन सकेमा समयमै रोग पहिचान हुने उपचार गर्न सकिन्छ ।